Sarkaal ka gedooday milateriga Soomaaliya oo lagu dilay Shabeellaha Hoose – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tixsiile – Mareeg.com: Sarkaal horay uga tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, balse ka gedooday oo lagu magacaabi jiray Yuusuf Cali Indhoole ayaa lagu dilay maanta deegaanka Tixsiile ee gobolka Shabeellada Hoose kaddib markii iska horimaad dhex maray ciidamo uu watay iyo milateriga Soomaaliya.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Shabeellada Hoose, Cabdi Ibraahim Shaamoow ayaa warbaahinta u sheegay in Yuusuf Cali Indhoole iyo ilaalo uu watay ay weerar ku qaadeen saldhiga milateriga Soomaaliya ku leeyahay Tixsiile, taasina keentay in la dilo isaga iyo afar ka mid ah ilaaladiisa.
“Shan qof oo uu sarkaalku ku jiro ayaa lagu dilay, tanina waxay soo afjaraysaa rabsho uu gobolka ka waday dhawaanahan Yuusuf Cali Indhoole,” ayuu yiri Taliyaha qaybta booliiska gobolka Shabeellada Hoose, Cabdi Ibraahim Shaamoow.
Taliye Shaamoow ayaa sheegay in Yusuuf Cali Indhoole oo dhuumaaleysi ku joogay deegaano ka mid ah gobolka Shabeellada Hoose uu dhowr jeer oo hore weerarro ku qaaday ciidammo ka tirsan kuwa dowladda oo gobolkaas ku sugan.
Yuusuf Cali Indhoole oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ka mid ah hogaamiyaasha ciidamo isbaarooyin dhigtay wadada Isku xirta Afgooye iyo Wanlaweyn, wuxuuna dhowr jeer la dagaallamay ciidamada dowladda Soomaaliya u saartay la dagaallanka Isbaarooyinka.
Yuusuf Cali Indhoole ayaa sidoo kale la saftay guddoomiyihii hore ee degmada Balcad Cismaan Xaadoole oo ay dowladda Soomaaliya raadineyso, kadib markii askar ka amar qaata degmada Balcad ku weerareen boolis ku socday Jowhar.
Guddoomiyihii hore ee degmada Balcad iyo sarkaalkan la oaran jiray Yuusuf Cali Indhoole oo watay maleeshiyaad hubeysan oo dowladda kala goostay ayaa baxsad ahaa tan iyo markii Balcad lagu dilay ciidamada booliska ee ka tegay Muqdisho, kuna sii jeeday Jowhar.